ဖြစ်​ရပ်​မှန်​ ] [ စ + ဆုံး ]
အမည်​နဲ့. §​နေရာ​လေး​တွေလွဲထားပါတယ်​ 1988 ခုနစ်​​လောက်​က အဖြစ်​ပျက်ေ​လးပါ
အဲ့ဒီ​ခတ်က ကား​​တွေဆိုင်ကယ်​​တွေမ​ပေါ်​​​​သေးဘူး​မြို့ကိုေ​ဈးဝယ်​ချင်လျင် လှည်း​စက်ဘီးကို”အသုံးပြုကျတယ်။ရွာတစိရွာမှာ​ပါ့ အေးသစ် ဆုမေသူငယ်​ချင်းနစ်​​ယောက်​ရှိပါတယ်​
​ဆု​မ က မြို့သို့အိမ်​အကူလုပ်​ရန်​ ​ရောက်​ရှိ​နေပြီး ​အေးသစ်​ကရွာမှာ လယ်​ယာလုပ်​ကိုင်​ရင်း
​အေးသစ်​ရဲ့ တစ်​​နေ့တာအလုပ်​ကိုပြီးဆုံး လို့လယ်​​တောမှ ပြန်​လာခဲ့ပါ​တော့သည်​။ ​ ​အေးသစ်​က. ရွာမှာသူကြီးသမီးဖြစ်​သလို ​ချောလဲ​ချောပါသည်​။
ဆု​မေလဲပိုက်​ဆံရှိအသိုင်းဝိုငိးတစ်​​ယောက်​ပါ မြို့မှာ​သေဖို့ကံပါလာတယ်​ဘဲ​ပြောရမလား​ပေါ့ လအ​တော်​ကြာလာ​သောအခါ တစ်​​နေ့မှာ ​အေးသစ်​မြို့ကိုစက်​ဘီး​စီးပြီး ​ဈေးဝယ်​ထွက်​ခဲ့ပါ​တော့သည်​။ဘာ​ကြောင့်​ရယ်​မသိ ဒီ​နေ့​အေးသစ်​စိတ်​​တွေ ​လေးလံ​နေပါသည်​။ အခါတိုင်းလိုမတူ ထူးခြားစွာဘဲ​လေး​နေပြီး ​ဈေးသွားဖို့စိတ်​မပါ​သော်​လဲ ​အေးသစ်​တစ်​​ယောက်​ ​ဈေးဝယ်​
ရန်​ပင်​ထွက်​ပြီး ​ဈေးသို့​ရောက်​​သော်​ ဝယ်​စရာရှိတာများ မြန်​မြန်​ ဝယ်​ပြီး ပြန်​ရမည့်​ခရီးက​ဝေး​သော​ကြောင့်​ ​အေးသစ်​တစ်​​ယောက်​ထဲ ​စော​စောပြန်​ခဲ့ပါ​တော့သည်​။ ​အေးသစ်​စက်​ဘီး​လေးအား တစ်​​ရွေ့​ရွေ့. စီးလာခဲ့​သော်​ ​တော်​​တော်​ခရီး ​ရောက်​ခဲ့ပါသည်​ ။ ဘယ်​​လောက်​ပင်​ ​စော၍ထွက်​ခဲ့​သော်​ငြား ခရီး​ဝေးလွန်း၍လားမသိ လမ်း တွင်​ပင်​​မှောင်​သွားခဲ့ပါသည်​။ လက်​နှိပ်​ဓါတ်​မီး​လေးအား ထိုးကာ တစ်​​ဖြေး​ဖြေးစီးလာပြီး ဘာကြောင့်​ရယ်​မသိမြို့သို့အလုပ်​သွားလုပ်​​နေ​သော
သူငယ်​ချင်း ဆု​မေအား သတိရကာ သူနဲ့တွဲခဲ့​သောအချိန်​​လေးသတိရကာ​တွေး​နေတုန်း ​နောက်​နားဆီမှာစက်​ဘီးစီးလာ​သံ တစ်​​ဂျောင်း​ဂျောင်းကြားရကာ ညအချိန်​ မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​ထဲလဲဖြစ်​ ​ကြောက်​တတ်​၍ ဝမ်းသာအားရဖြစ်​ကာ အ​ဖော်​ရပြီဟု​တွေးကာ ​နောက်​ကစက်​ဘီး
စီးလာ​သောသူအား​ ​အေးသစ်​ကိုမှီ​အောင်​ တစ်​​ဖြေး​ဖြေးချင်းနင်းလာပါ​တော့သည်​။
ဟင်​စက်​ဘီး သွသာကြားရတာ ​အေးသစ်​ကိုဘာလို့မမှီ​သေးတာလဲ စဉ်းစား​နေတုန်း ​အေးသစ်​​ရေ. ​အေးသစ်​ ဟင်​င်ါနာမ်​မည်​​ခေါ်သံကြားတယ်​ဟ ဒီအသံရင်းရင်းနှီးနှီး ကြားဖူးပါတယ်​။ ​ဪ သူငယ်​ချင်းဟုတ်​တယ်​ ဆု​မေအသံဘဲ မြိုကပြန်​လာတာလားမသိဘူး ​နင်း​နေတဲ့ စက်​ဘီး​လေး လမ်း​ဘေးချရပ်​ပြီး သူငယ်​ချင်းကိုပြန်​လှည့်​ကြည့်​​တော့ ဟင်​ ဘယ်​သုမှလဲ မရှိပါလား စိတ်​ထင်​​နေတာလား ညကြီးဆို​တော့ စိတ်​ထင်​တာဖြစ်​မှာပါ​လေ. ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို အား​ပေးရင်း စက်​ဘီး
​လေးဆက်​နင်းလာ ​တော့ ​စော​စောက. စက်​ဘီးစီးသံ တစိ​ဂျောင်းဂျာင်းနဲ့. စီးလာသံကိုထပ်​
ကြားရပြန်​​ရော မကြာပါ ထိုစက်​ဘီးစီးလာတဲ့ အသံက. ကိုယ်​​ရောင်​ ကိုယ်​ထည်​ မမြင်​ရ
ပါဘဲ ​ဘေးက​နေ. ​ဂျောင်း​ဂျောင်း နဲ့. ​ရှောင်​ပြီးစီးသွားသံကို ​အေးသစ်​အတိုင်းသား ကြားလိုက်​ရပါ​တော့သည်​။ ​
အေးသစ်​​ခေါင်းနပန်းကြီးကာကြက်​သီးများထလာ၍ ရွာသို့. အမြန်​ ​ရောက်​အောင်​ စီးခဲ့ရပါ​တော့သည်​။ ရွာ​ရောက်​​တော့ခြေလက်​​တွေတုန်​လို့်​ ​ဘုရားစင်​မှ ​ရေမန်းများ
ယုကာ ​သောက်​လိုက်​ပါ​တော်​သည်​။ ​အေးသစ်​အ​မေက. ဘာဖြစ်​လာတာလဲ​မေး​တော့ ​ခြေလက်​
အဲ့ ည မှာဘဲ သူငယ်​ချင်း ဆု​မေအသကိခံရလို့ဆုံးပြီ ဆိုတဲ့သတင်းကို သူ့ သူု​ဋ္ဌေးမှ ဖုန်းဆက်​​ပြော​တော့ ရွာထဲ ဟိုး​လေးတစ်​​ကျော်​ဖြစ်​ကာ ​အေးသစ်​လဲ ကြားရတဲ့သတင်း​ကြောင့်​
သူငယ်​ချင်းအတွက်​များစွာ စိတ်​မ​ကောင်းဖြစ်​ရပါ​တော့သည်​။ လမ်းမှာ သူငယ်​ချင်း​ခေါ်​သောအသံကို ယခုမှသ​ဘောပေါက်ကာ​တွေးမိပြီး​​ပြန်​ကြားကာ ​ကြောက်​​ လဲ​​​​ကြောက်​
သနားလဲသနားဖြစ်​ကာ သူငယ်​ချင်းရဲ့. သတင်းဆိုးတစ်​ခု​ကြောင့်​ တုန်​လုပ်​ကာ အိပ်​မရဖြစ်​​နေပါ​တော့သည်​။ ​နောက်​​နေ့မနက်​​ရောက်​​တော့ သူငယ်​ချင်းရဲ့မိဘ
များ​ဆွေးမျိုးများနဲ့. ​ဆေးရုံသို့လိုက်​သွားကာ သမီးရဲ့အ​လောင်းကို ရွာပြန်​သယ်​ရန်​လုပ်​စရာ
သူငယ်​ချင်း သတ်​ခံရတာကအိမ်​ရှင်​သူ​ဌေးနဲ့ ဘာရန်​ငြိုးမှမရှိဘူး သူ​ဌေးရဲ့
အစ်​ကိုသည်​ အတူမ​နေပါဘူး ဒါ​ပေမဲ့ သူညီအိမ်​ကိုအလည်​လာရာ ညအိပ်​​နေပြီး ခဏတည်း​နေခဲ့ပါသည်​​။ ဖြစ်​ချင်​​တော့ သူ​ဌေးရဲ့အစ်​ကိုသည်​4စွဲ​နေသုတစ်​ဦးဖြစ်​​နေခဲ့ပါသည်​။
တစ်​​နေ့မှာ ဆု​မေရဲ့. သူ​ဌေးများက. ခရီးတစ်​ခုသွားစရာရှိ၍ ဆု​မေအား အိမ်​မှာ တစ်​​ယောက်​ထဲ ထားခဲ့ကာ ထို4သမားနဲ့. ဆု​မေ. နစ်​​ယောက်​ထဲ ကျန်​ခဲ့ပါသည်​။ သူ​ဌေးက. သူ့ရဲ့. အစ်​
ကိုအား စိတ်​ချကာ ဆု​မေအားထားခဲ့ပြီး မိသားစုလိုက်​ ခရီးထွက်​သွားခဲ့ပါသည်​။ ဆု​မေအသက်​က. 27​လောက်​​တော့ရှိပြီ သူ့မှာ ချစ်​သူလဲရှိတယ်​ သူ့ချစ်​သူက. မကြာလာ​တွေ့တယ်​
တစ်​ရက်​ကျ​တော့ 4,သမားသည်​ 4​ကြောင်​ကြောင်​ကာ ဆု​မေအား သတ်​ဖို့. လူသတ်​ဓား
အားအသင့်​ပါလာကာ အခန်းပိတ်​၍ လူစိတ်​​ပျောက်​ကာ ဆု​မေအား တစ်​ချက်​ထဲ အ​သေမသတ်​ဘဲ ​နေရာ အနှဲ့. ထိုးနက်​ကာ သတ်​​နေပါ​တော့သည်​။ ဆု​မေသည်​ အခန်းကျင်း​လေးထဲမှာထို 4သမားရဲ့. လူစိတ်​မရှိ သတ်​ဖြတ်​ခြင်းကို
နာကျင်​စွာ ခံစားရင်း ​သေဆုံး ခဲ့ရပါ ​တော့သည်​။
ဆု​မေဆုံးပြီး မကြာခင်​ ဆု​မေချစ်​သူသည်​ တိုက်​တိုက်​ဆိုင်​ဆိုင်​ဘဲ ​ရောက်​လာကာ သုရဲ့
ချစ်​သူကို ​ရက်​ရက်​စက်​စက်​ အသတ်​ခံရတာ​တွေ့သွား​တော့ 4သမားနဲ့. သူ​သေကို​သေ
ဝင်​လုံး​နေပြီးထို4သမားသည်​ဓားပါ​သော​ကြောင့်​ နိုင်​​အောင်​မလုံးနိုင်​ဘဲ ​နောက်​ဆုံး​တော့ ဆု​မေရဲ့ချစ်​သူပါ သတ်​ပစ်​ချင်းကိုခံ​လိုက်​ရပါ​တော့သည်​။ ထိုသတင်းကိုကြားကြားချင်း သူ​ဌေးများ ပြနိလာကာ ဆု​မေရဲ့မိဘ​တွေအသိပေးပြီး ဖုန်းဆက်​​ခေါ်ကာအ​ကြောင်းစုံရှင်းပြပြီး
အ​လောင်းအား ရွာသို့်​ ပြန်​သယ်​ကျတာ​ပေါ့ မိဘများလဲ ရင်​ ထုမနာဖြစ်​ကာ​ငို​ကြွေးရငိး
​ရော်​​ကြေးရသည့်​ပိုက်​ဆံ​လေးယုကာရွာသိုပြန်​ခဲ့ပြီး လမ်းမကြီး​ပေါ်မှာ ထိုကား​လေးသည့်​တစ်​
​ရွေ့​ရွေ့​မောင်း​လာကာ ကား​ပေါ်ပါ ​ဆွေးမျိုးများ စိတ်​မ​ကောင်းကြီးစွာ ဖြစ်​​နေပါသည်​။ အ​လောင်းကြီးအားတစ်​လမ်းလုံး ကြည့်​​နေ​ရသောအခါ ဆု​မေရဲ့​ဦး​လေး​တော်​သူသည်​ ​ကြောက်​စိတ်​များ
ဝင်​လာကာ ဘုရားစာ​တွေစိတ်​ထဲမှာရွတ်​ကာအန္တရာယ်​ကင်း​အောင်​ ဘုရားစာများ အဆက်​မပျက်​ ရွတ်​​ဖတ်​​နေမိပါ​တော့သည်​။ ဆု​မေရဲ့အ​မေကိုကြည့်​​တော့လဲ ငို​နေသည်​။
မကြာပါ လက်​အေအေးကြီးနဲ့. ​ကြောကုန်းအား​လာထိလိုက်​​သော​ကြောင့်​​ကြော
တွန့်​သွားကာ အ​ခြေ​နေမပျက်​ ဘာမှမဖြစ်​သလို​လေး​နေကာ ​ကြောက်​စိတ်​ကိုထိန်းကာ
ငြိမ်​​နေမိပါ​တော့သည်​။ ထိုအခါ ခရီးတစ်​ဝက်​ကြိုးလာ​သောအခါ မထင်​မှတ်​ဘဲ စီးလာ​သော
အ​လောင်းကားသည်​၊။ တိမ်း​မှောက်​သွားပါ​တော့သည်​။ ​စော​စောက. အ​ခြောက်​ခံလိုက်​ရ​သော သူက. လက်​ကြိုးသွားပြီး ကျန်​သူများကပွန်းပဲ့​သွားယုံ​လောက်​သာဖြစ်​ပြီး နီးစပ်​ရာ ​ဆေး
ရုံသို့ပို့ခဲ့ရပြီး ထိုအ​လောင်းနဲ့. ကျန်​သူများလဲ ရွာကိုဘဲ​မောင်းခဲ့ပြီး ထိုထဲကအ​လောင်းပိုင်​ရှင်​ဖြစ်​သူ မကြည်​ကြည်​က. သမီး​လေးဆု​မေ​ရေအ​မေတို့ကို မ​နောက်​လျကိပါနဲ့. အိမ်​ကို အန္တရာယ်​ကင်းစွာ ပြန်​​ရောက်​ချင်​တယ်​ ​​အေ​ဆေး ပြန်​ခွင့်​​ပေးပါ မကြည်​ကြည်​​တောင်းပန်​လိုက်​မှ
အ​ခြေ​နေ​ကောင်းစွာ ရွာပြန်​လာခဲ့ရပါသည်​ အ​လောင်းအား ရွာပြင်​ထားပြီး တစ်ရွာလုံးစိတ်မ​ကာင်းဖြစ်​နကျရပါသည်။ရစရာမရှိ​အောင်​ထိုး သတ်​ထားတာနားရွက်​​တွေပျက်​ မျက်​နာမှာဓါးရာ
​တွေ​ကြောက်​စရာ​ကောင်းလိုက်​တာ ​​တော်​​တော်ခံရမှာ သူငယိချင်း​ရ နောက်ဘဝဆက်တိုင်းဒီလိုအ ဖြစ်​ဆိုးမျိုး ထပ်​မကြုံပါ​စေနဲ့လို့တစ်​​ယောက်​ထဲ
စိတ်​ထဲကဆု​တောင်း​နေမိတာပါ အေးသစ်​​တစ်​ယာက်ညကျ တစ်​ယာက်ထဲ
အိပ်တာဆို​တော့သူငယ်​ချင်းဖြစ်​သူ ​ဆု​မေသည်​ ည12​လောက်​ကျ ​အေးသစ်​အား ​​ခြေ​ထောက်​က​နေ ဆွဲချတာခံလိုက်​ရပါ​တော့သည်​။
​ကြောက်​အားကြီးပြီးအ​ဖေနဲ့. အ​မေကြားမှာ ဝင်​အိပ်​ပစ်​ပါ​တာ​ပေါ့ ​နောက်​ညကျ​တော့လဲ
အဲ့လိုဘဲ အိပ်​မရ​အောင်​ ​အေးသစ်​အား ဆွဲဆိတ်​တာခံလိုက်​ရပါပြီး ထိုနည်း၎င်း အ​ဖေနဲ့အ​မေကြားဘဲဝင်​အိပ်​ပါသည်​။ ရပ်​မလည်မချင်း ဆု​မေရဲ့​ခြောက်​လန့်​ခြင်းစ​နောက်​​နေခြင်းကို
ခံခဲ့ရပြီး ရက်​လည်​ဆွမ်း​ကြွေးပြီး​တော့မှ အိပ်​ယာထဲံကောင်း​ကောင်းအိအ်​ခဲ့ရပါသည်​၊။
ဆု​မေဆုံးပြီး 5နစ်​ကြာလာ​သောအခါ အိမ်​နားနီး အစ်​မကြီးဆီမှာ ဝင်းစားတယ်​ဆိုတဲ့သတင်းကြားရ​တော့တာ​ပေါ့ လူဝင်​စားပြန်​ဖြစ်​ကာ ဆု​မေရဲ့အ​မေလဲ ဝမ်းသာကာ သူ့သမီး​လေးအား
​ရွှေများဆင်​​ပေးကာအချစ်​ကြီးချစ်​​နေမိပါ​တော့သည်​။ ​ကောင်​မ​လေး 5နစ်​သမီးမှာ သူဘဝ​ဟောင်းက. ဖြစ်​ခဲ့သမျှ ကိုပြန်​​ပြော​နိုင်​​သော​ကြောင့် ယခုလိုဝင်​စားတယ်​ဆိုတာသိခဲ့ရပါတယ်​
ယခုခါဘဝ​ဟောင်းက သူငယ်​ချင်းလဲ ရှိ​နေပါ​သေးတယ်​ ဒါ​လေးက. စာ​ရေးသူရွာမှာ အမှန်​တစ်​ကယ်​ဖြစ်​ခဲ့တာ​လေးပါ ပြီးပါပြီ ​ကြောက်​စရာမ​ကောင်းခဲ့ရင်​​တောင်းပန်​တယ်​ စာတိုသွားရင်​လဲ​တောင်းပန်​ပါတယ်​ ဟုတ်